Tendrom-Po tsy mba Namana tao amin’ny Fampitam-Baovaon’ny Fiaraha-monina Panamenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2015 8:52 GMT
“<3 ko ny Atialako.” Sary nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy Panameana ho setrin'ny fanehoan-kevitra an-tseraseran'i Rita García.
Lohahevitra mamaivay ao Panama ny fifindra-monina, ary mitsoka ny afo ny tambajotra sosialy. Hetsika kely dia kely maromaro an-tserasera dia mety afa-miantraika malalaka dia malalaka amin'ny fiainan'ny olona.
Vao haingana dia haingana teo ny mpanao lalàna Panameana Zulay Rodriguez no voazimbazimban'ny mpisera aterineto any ivelany noho ny kabariny tao amin'ny parlemanta nampiasany ny voambolana “faikan'olona” hamariparitany ireo olom-pirenena Kolombiana voasambotra any Panama, miampanga ny vahiny ho manao ireo karazam-panitsakitsahan-dalàna manerana ny firenena, ary misolovava amin'ny famaranana ny fandaharan'asa Crisol de razas (melting pot – fifangaroan'olona na fifanambadian'olona samihafa fiaviana sy/na volonkoditra), izay mikendry ny hanamorana ny fanomezana zom-pirenena ireo mpifindramonina an'arivony tsy manana antonta-taratasy ara-dalàna any aminy.
Nanameloka ilay kabary ihany koa ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Kolombiana sy ny Fampitam-baovao Panameana. Niala tsiny tamin'ny teniny i Rodriguez taty aoriana, saingy mbola nanohy ny adi-hevitra tamin'ny fanamarihana nataony ny mpisera aterineto. Tsy mahagaga raha nahery vaika dia nahery vaika teo amin'ny famaliana ny mpifindramonin'i Panama.
Venezoelana mpifindra monina Rita García namaly ny kabarin'i Rodriguez tamin'ny alalan'ny ngonongonona mampiady hevitra mamely ny Panameana, mampitaha azy ireo amin'ny “gidro” ary milaza azy ireo ho tsy mahay manaja ny kolontsaina vahiny. Taorian'ny totohondry sesilany dia namafa ny lahatsorany nirehidrehitra i García, saingy tsy talohan'ny nielezany nanerana ny aterineto izany. Namaly tamin'ny alalan'ny fanangona-tsonia an-tserasera tao amin'ny Change.org miantso ny handroahana azy ireo mpisera aterineto tafintohina, izay nahazo sonia mihoatra 17000 tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Niezaka ny nifandray tamin'i Garcia ny manampahefana ao Panama misahana ny fifindramonina, saingy efa very asa izy sy ny vadiny ary nandao ny firenena.
Tao amin'ny Pin Radio i Alejandra Farías, mpifindramonina iray hafa avy any Venezoelà, namoaka lahatsoratra iray hafa mitondra ny lohateny hoe Izao no anipazana any ivelany ny Venezoelàna, izay nanehoany ny fahatezerany sy ny nandreseny lahatra fa tokony ho lesona hoan'ny Venezoelana mpifindra monina any Panama ny tranga nahazo an'i Garcia :
¿Quién se cree Rita García de Zedde para ofender y no recibir ningún escarmiento?. Yo estoy a favor de su deportación. ¿Cuántos venezolanos no quisieran tener ahorita, el empleo en el banco Panameño que tenía Rita?. ¿Cuántos venezolanos viven meses separados de sus familias tratando establecerse para trasladar a esposa e hijos con alguna comodidad? ¿Cuántos Venezolanos exiliados salen todos los días a “patear calle” a ofrecer sus productos, mostrar sus negocios o a repartir hojas de vida?
Iza no mieritreritra fa afa-miteniteny foana tsy ho voasazy i Rita García? Manohana ny fandroahana azy aho. Firy moa amin'izao fotoana izao ny Venezoelàna tsy maniry ny asa ananan'i Rita ao amin'ny banky Panameana? Firy ny isan'ny Venezoelàna nandany volana maro tafasaraka amin'ny fianakaviana, miezaka ny hanori-ponenana, mba ho afa-mandefa [vola] hoan'ny vady aman-janany hifindra monina tsy misy raorao? Firy amin'ireo Venezoelàna mpialokaloka no “mandehandeha eny an-dalambe” mba hanolotra ny vokatra avy aminy, hampiseho ny fandraharahany, ary manolotra ny CV-ny?
Tsy fifanafihana avokoa anefa ny setriny an-tserasera. Misy ihany koa ireo fanehoan'ny Panameana fankasitrahana hoan'ny mpifindramonina tahaka ny nataon'ny Shaila Valdez, izay nizara voambolana maro misariaka ao amin'ny Facebook:
Tiako ny Kolombianako mikirakira ny hohoko amim-pandavorariana, ary manaisotra ny voloko tahaka ny andriamanitra. Tiako ilay manatona ahy ao amin'ny hotely fisakafoanana ary miteny hoe “manao ahoana,” “andraso vetivety,” ary “vetivety dia hiverina” amiko!!!
Tiako ny Dominikanako izay manala voly ahy, ary milalao ny bachata tiany dia tiany ho ahy, rehefa mampiseho ahy amin'ny findainy ny sarin'ny zanany nilaozany any amin'ny Repoblika Dominikana.
Tiako ilay Shinoa mijoro eo amin'ny kihondalan'ny vaki-paritra misy ahy ary miarahaba amin'ny “INONA NY VAOVAO” sy ny vehivavy amin'ny “MANAO AHOANA IANAO RY ZAZAVAVY?”
Tiako ny Italiana izay manao pizzas avy amin'ny lafaoro ary ny nanangana ny pizzeria taona maro dia maro lasa izay izay dia ny dadabeny.
Tiako ny Alemà izay mitondra labiera sy paoma ho ahy, ary mampianatra ahy ny “miarahaba maraina” sy ny “misaotra indrindra” amin'ny teny Alemà, rehefa mankalaza ny Oktoberfest…
Tiako ny mpifindramonina izay tonga eto manao izay hahalehibe kokoa sy mamokatra kokoa an'i Panama, dia ireo tonga eto handroso ao anatiny fanetre-tena… Tiako izy ireo satria faniriako ny hitiavan'ireo olona avy amin'ny firenen-kafa ny vahoakako rehefa tonga hikaroka hoavy tsaratsara kokoa izy ireo.
Panama, ny tetezan'izao tontolo izao sy fon'ny tontolo rehetra hita maso.
Lalan-tsarotra, mazava loatra, ny fifindra-monina ao Amerika Latinina, ary ny trangan-javatra tamin'i Zulay Rodriguez sy Rita García no mampiseho ny mety ho trotraka ampian'ny aterineto, satria afa-mampifandray ny vahoaka tafasara-toerana izy io. Anjaran'ny tsirairay ny misafidy ny karazana fampitam-baovao sosialy tiany ananana.